Guutada P18 ee Gotland oo xariga laga jaray - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Howlgelinta guuto ciidan sawir: Jonas Ekströmer/TT
Guutada P18 ee Gotland oo xariga laga jaray
La daabacay måndag 21 maj 2018 kl 16.39
Dabaal degga dib u furida guutada ciidan ee P18 Gotland ayaa waxa maanta ka qeyb galay boqorka, ra’iisal wasaaraha iyo abaan duulaha ciidanka.
Guutadan cusub ee P18 ayaa noqoneysa tii ugu horeysay ee difaaca Sweden lagu soo kordhiyo laga soo bilaabo dagaal weynihii labaad ee dunida.
Abaan duulaha ciidanka Micael Bydén:
- Khariiradda ciidanka Sweden ayaa dib loo xariiqay inagoo dib u furnay guutada ciidan ee Gotland. Arintani waa wax weyn waana mid sax ah. Waxa inagu filan inagoo eegna khariiradda badda baaltikada si aan u fahano istaraatiijada jasiiradda Gotland leedahay.
Wasiirka difaaca Peter Hultqvist (S) oo isaguna ka hadlay arintaa ayaa sheegay in aasaaska guutada Gotland tahay signaal cad ee dhanka siyaasadda amaanka iyo sida ay muhimka ay dowladda Sweden ugu arago Gotland.
Xaaladda ammaan ee soo xumaaneyso iyo xasaaradda badan oo ka imaneysa dalka Ruushka ayaa ka danbeysay in dowladda iyo baarlamankuba sanadki 2015 go’aan ku gaaraan in si joogto ah militarigu u joogo jasiiradda Gotland.
- Sidan ayeynu ku heli karnaa xarun la sii dhisi karo laguna soo kordhiyo waxey u baahan tahay, ayuu yiri Hultqvist.
Waxaa haddii kale dhibaato ka iman kartaa in xilliga dagaalka la yiraahdo ciidan ha loo diro jasiiradda.
- Haddiise ciidan si joogto ah u joogo goobta waxey keeneysaa iney sahlanaato xoojinta amaanka, ayuu yiri Hultqvist.
Arin dagaal oo dhici karto ayaa ah in metelan khilaaf dhex yimaado Ruushka iyo wadamada baalitiga taasoo keeni karta in Ruushku qabsado Gotland si uu uga hortago in Naato ay xoojin ciidan u soo dirto wadamaddaa.
Sanadka 2020 ayaa la rajeynayaa in la dhameystiro dhismaha guutada iyadoo kharashka taa ku bixi doontana lagu qiyaasayo 780 milyan oo karoon.